Astaamaha Aztec iyo astaantooda loogu talagalay tattoos | Tattoo
Astaamaha Aztec ee lagu xidho sawirkaaga
Susana godoy | | Tattoos diimeed
ka astaamaha aztec Iyagu waa mid ka mid ah naqshadaha waaweyn ee aan ku dhegan karno shaatiga. Waxaan dib ugu laabaneynaa midow dhaqan iyo mid diimeed oo ka kooban ilbaxnimadan. Xitaa iyadoo waqtiga laga gudbayo, mid kasta oo ka mid ah astaamahaas macnaha badan siiyay ayaa wali aad ugu habboon.
Haddii aad jeceshahay astaamaha Aztec oo aad ka fekereyso inaad midkood xirato, maanta waxaan magacaabi doonnaa oo aan ku sharixi doonnaa wax yar. Sidan ayaad ku ogaan doontaa dhammaantood waadna ogaan doontaa maxay naqshadahani astaan ​​u yihiin. Ha moogaanin wax kasta oo aan maanta kuu hayno!
1 Asalka tattoosyada leh astaamaha Aztec
2 Tattoo qorraxda iyo astaamaheeda
3 Gorgorka Aztec ee xoogga iyo xoogga
4 Kalandarka weyn ee Aztec ee qaabka tattoo
5 Abeesada Aztec ama Quetzalcoatl
6 Dagaalyahan ilaah Tezcatlipoca
Asalka tattoosyada leh astaamaha Aztec
Waxaan aadeynaa Mexico, maxaa yeelay taasi waa meesha aan ka qoyno dhaqanka iyo ilbaxnimadan. Tattoo noocan ah marwalba waxaa loo sameeyay inay ilaaliyaan ilaahyada. Waxay ahayd wax aad u caadi ah in iyaga la sameeyo iyagoo fulinaya nooc ka mid ah cibaadada. In kasta oo ilaahyadu ahaayeen sababta ugu weyn, haddana waa in la sheegaa in mararka qaarkood, tattoos loo adeegsaday in lagu kala sooco dadka ka soo jeeda hal qabiil ama mid kale. Si la mid ah, waxay sidoo kale tixraac weyn u ahaayeen dadka dabaqadaha bulsheed ee kala duwan, dagaalyahannada, iwm. Dhaqankan ayaa loo tixgeliyey taas meelaha ugu badan ee jirka lagu sawiro waxaa ka mid ah xabadka, caloosha ama cudurada hore iyo curcurada.
Tattoo qorraxda iyo astaamaheeda
Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee Aztec ayaa ahaa Tattoo qorrax. Waxay ahayd sharaf Ilaahow qorraxda in loo yaqaanay sida Huitzilopochtli. Qof kastaa wuxuu u haystay inuu yahay masuulka samada ilaaliya. Halyeey baa ku hareeraysan. Waxaa la sheegaa in kastoo uu ku jiray caloosha hooyadiis, wuxuu awood u yeeshay inuu barto qorshe ay wada lahaayeen walaashiis iyo walaalihiis ka weyn. Dhammaantood waxay doonayeen inay dilaan hooyadood. Haddaba markii Qorraxdii Eebbe dhashay, wuxuu ahaa kii walaashiis diley oo Dayax u beddelay, halka walaalihiisna ay noqdeen xiddigo. Haddii aad rabto inaad siiso tattoo sida macnahan weyn, waxay noqon doontaa inay jirto jiritaanka nolosha ka baxsan.
Gorgorka Aztec ee xoogga iyo xoogga
Mid kale oo ka mid ah astaamaha Aztec waa gorgor. Waxay ahayd mid ka mid ah nashqadahaas aad ku aragtay dagaalyahanno. Wax ka badan maxaa yeelay astaan ​​xoog iyo geesinimo. In kasta oo sida noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'tattoos' aan leenahay tusaalooyin dhowr ah, waxaa jira mid aad u dabeecad leh Waa gorgor oo madaxiisu u jeedaan dhinaca galbeed afkiisuna waxyar buu casayaa. Waa mid ka mid ah nashqadahaas ka imanaya dhaqan caan ah oo cidda xidhataba waxay ku siin doontaa badbaado iyo sidoo kale geesinimada loo baahan yahay.
Kalandarka weyn ee Aztec ee qaabka tattoo
Waxa loogu yeero Kalandarka Aztec, Waa mid kale oo ka mid ah astaamaha waaweyn ee loogu talagalay tattoosyada leh qaabkan. Waa naqshad leh astaamo tiro badan. Dhammaantood, waxaad ka heli kartaa aqoon cilmiga xiddigiska iyo halyeeyada qarsoon. Kalandarka wuxuu ahaa dhagax weyn oo qarsoonaa in ka badan 200 oo sano. Waxaa la sheegay in dhagaxan uu lahaa qiyaastii 24 tan iyo dhexroor ka badan saddex mitir.
Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta ku jirta Tattoo, had iyo jeer badiyaa waxay leeyihiin cabbir aad u tiro badan. Marka, haddii aad diyaar u tahay inaad sameysid naqshad sidan oo kale ah, waxaa ugu wanaagsan meelaha ay ka mid yihiin dhabarka ama laabta si ay ula dhalaasho dhammaan quruxdeeda. Bartamaha tattoo wuxuu noqon doonaa wajiga Ilaaha Qorraxda.wuxuu astaan ​​u noqon doonaa nolol iyo geeri Dhinacyada geesaha, waxaa ka muuqda magacyo leh afarta qorraxood ee kale. Cunsurrada kale ee ku jira, waxay u yimaadaan inay go’aamiyaan maalmaha dhexgalay faahfaahinta qorraxda, iyo sidoo kale masaska.
Abeesada Aztec ama Quetzalcoatl
Dabcan, xayawaanku sidoo kale waxay kujiraan astaamahaas. Xaaladdan oo kale, waxaan la harnay abeesada ama sidoo kale loo yaqaan Quetzalcoatl. Xaqiiqdii waad ku aragtay nashqado badan! Waa astaan ​​kale oo ka mid ah astaamaha waaweyn ee dhaqan sidan oo kale ah. Waxay astaan ​​u ahayd bacriminta, laakiin sidoo kale wuxuu ahaa kii aqoonta siiyay, isla waqtigaasna barashada. Masku wuxuu ahaa mid ka mid ah ilaahyada xoogga leh, kaas oo sidoo kale la xiriira cimilada.
Dagaalyahan ilaah Tezcatlipoca
Shaki kuma jiro Dagaalyahan ilaah waxa kale oo ay ahayd naqshado kale oo waaweyn. Xaaladdan oo kale, waxaa la sheegay in aan la arki karin, in kastoo ay muuqan karto habeennada qaarkood. Waxay astaan ​​u ahayd dhammaan khilaafaadka iyo sidoo kale ifafaalaha saadaasha hawada. Ma ogeyd astaamahan oo dhan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos diimeed » Astaamaha Aztec ee lagu xidho sawirkaaga
Candelaria Tinelli waxay ku soo bandhigtay tattoo cusub gacanteeda bidix
Tattoo-ka cusub ee Arturo Vidal ayaa kugu dhiirrigelin doona: "Weligaa Ha Quusan"